Tom & Jerry: 80 sano ayaa la daawanayaa dagaalka bisadda iyo jiirka - BBC News Somali
Bisad lab ah oo kartoon ka sameysan oo muuqaal laga dhigay ayaa ka caroonaya shanqarta jiir ku jira gurigiisa, kaddib wuxuu diyaarinayaa qorshe uu uga soo saaro hoygiisa, isagoo u dhigaya dabin ka sameysan cunto uu jiirka ka helo. Jiirkii, oo caqli badan leh ayaa fahmaya qorshaha oo dhan, si nabad ah ayuuna dabinkii uga cunayaa raashinkii lagu gaadayay, isagoo calooshiisa ay buuxdo ayuuna ku noqonayaa hoygiisa.
Waad iska qiyaasi kartaa waxa xiga markaas kaddib. Sheekadu waxay ku dhammaaneysaa sida ay mar walbaba ahaan jirtay: Bisadkii oo caro awgeed la qeylinaya, xanuun dareemaya, halka qorsheyaal kalena ay sidaas u fashilmayaan.
Waxaa laga yaabaa in qof walba uu yaqaanno filimkan, laakiin sheekada dhabta ah ee ka dambeysa sidaas ma aha.
Muuqaalkan abaalmarinnada faraha badan helay, wuxuu xitaa mar lugaha la galay sarbeeb ku saabsan dagaalkii qaboobaa ee Adduunka - sidadina waa qaabka ay Tom iyo Jerry, oo isbuucan daawashadooda ay galeyso 80 sano, ku noqdeen mid ka mid ah ficillada kala aargoosiga ah ee ugu caansam dunida.
Labadan xayawaan ee filimka laga dhigay waxay ahaayeen fikrad ka timid dad ciishooday.
Studio-ga muuqaalada kartoonka ah laga soo saaro ee MGM, oo ah halka ay ka shaqeyn jireen Bill Hanna iyo Joe Barbera, ayaa in muddo ah ku dhibaatoonayay sidii uu guul uga gaari lahaa tartanka uu kula jiray xarumaha kale ee lamidka ah, kuwaasoo heer fiican ka gaaray filimada ay ka midka ahaayeen Porky Pig iyo Mickey Mouse.
Maalin maalmaha ka mid ah, labada farshaxamiiste, oo da'doodu ay ka hooseysay 30 sano ayaa billaabay inay fikrad sameeyaan.
Barbera wuxuu sheegay inuu jecelyahay wax ku saabsan ficillada bisadda iyo jiirka, kuwaasoo uu doonayay in kartoon laga sameeyo iyagoo isdagaalaya islamarkaana is eryanaya, inkastoo horay loo sameeyay iyagoo aan tiro lahayn.
Xalaqadii ugu horreysay ee ay sameeyeen waxay ugu magac dareen "Puss Gets the Boot", waxaana la sii daayay sanadkii 1940-kii.
Muuqaalkaas ugu horreeyay ayaa aad loo wada jecleystay, waxaana loo xushay abaalmarinta Oscar, ee filimada.
Inkastoo ay shaqo fiican qabteen, lama ammaanin labada farshaxamiisteba.
Maamulkii xarunta ay ka shaqeynayeen ayaa markii dambe u sheegay inaysan fikradahooda oo dhan ku khasaarinin hal meel.
Laakiin fursaddahabi ah waxay timid markii ay haweeney shirkad filimada sameysa ku lahayd gobolka Texas u soo dirtay farriin.
Waxay waydiisay goorta ay xalaqad kale ka daawan doonto muuqaalkii bisadda iyo jiirka, waxayna ku qeexday "kartoon bisad iyo jiir ah oo cajiib ah".
Labada xayawaan oo markii hore magacyadooda loo yaqaannay Jasper iyo Jinx, waxaa laga dhigay Tom iyo Jerry.
Filimkii yaanyuuraha ee fashilmay
Lahaanshaha sawirka LMPC via Getty Images
Image caption Mararka qaar waa saaxiibbo, mararka qaarna waxay isku yihiin cadow, wayna is eryanayaan
Sida uu sheegay Barbera, ma jirin wadahadal dhab ah oo laga yeeshay sababta aysan Tom iyo Jerry u hadlin. Laakin maadaama ay kusoo koreen daawashada filimada shactirada ah, sida kuwii Charlie Chaplin, waxay aaminsanaayeen in iyagoo aamusan xitaa ay qosol yeelan doonaan.
axaa lagu kabay muusiko, taasoo uu saaray Scott Bradley. Cabaadka bani'aadanka ee uu Tom leeyahayna waxaa duubay Hanna laftiisa.
Labaatankii sano ee ugu horreysay Hanna iyo Barbera waxay soo saareen ilaa 100 xalaqo, oo muuqaallo gaagaaban ah.
Mid kasta waxaa lagu sameynayay isbuucyo, waxaana lagu kharash gareynayay ilaa $50,000 oo doolar. Sidaas darteed, sanadkiiba toban xabo ka badan lama soo saari karin.
Tom iyo Jerry waxay noqdeen kuwo laga yaqaano dunida oo dhan, waxayna dad badan u arkaan kartoon-ka ugu wanaagsan ee abid la daawado.
Waxay muuqaalada ku guuleysteen abaalmarinno badan, waxayna boos ka heleen shirkadda weyn ee filimada sameysa ee lagu magacaabo Hollywood.
"Waan hubaa inaad daawatay adigoo carruur ah, xitaa haddii aad hadda eegto way kugu adkaaneysaa inaad garatid markii ugu horreysay ee la billaabay", sidaas waxaa yiri Jerry Beck, oo ka faallooda taariikhda filimada kartoonka.
"Waa muuqaallo aad u macaan oo aan waligood laga xiiso dhigeynin", ayuu yiri. "Sawir waa iska sawir, waana ognahay inay sawir gacmeedyada soo billowdeen 1800 ama 1700, laakiin micno ma laha waayo ilaa maantaba waa la adeegsanayaa".
Image caption Jerry wuxuu muuqaal kula ciyaaray Gene Kelly, mar ay ku sugnaayeen xaflad muusig ah 1945-kii
Image caption Labada xayawaan waxay sidoo kale muuqaal kala soo muuqdeen atariishada dabaasha ciyaarta ee lagu magacaabo Esther Williams sanadkii 1953-kii
Markii uu filim soo saarihii lagu magacaabi jiray Fred Quimby howlgab noqday bartamihii 1950-meeyadii, Hanna iyo Barbera waxay la wareegeen howshii soo saarista Tom iyo Jerry.
Waxay kharash badan ka sameyn jireen inay dib usii casriyeeyaan muuqaalladii hore, iyagoo kuwo cusubna kusoo darayay.
Markii xaruntii ay ka shaqeynayeen albaabbada la isugu dhuftay sanadkii 1957-kii, Hanna iyo Barbera waxay sameysteen shirkad flimada sameysa oo u gaar ah.
Laakiin dhowr sano kaddib, shirkaddi hore ee MGM ayaa dib usoo noolaatay, waxayna la wareegtay soo saaristii Tom iyo Jerry.
Sanadkii 1961-ii, waxaa magaalada Prague ee waddanka Czech Republic laga furay studio loogu talagalay in muuqaalladaas lagu sameeyo. Farshaxamiiste ku dhashay Chicago, oo lagu magacaabi jiray Gene Deitch ayaa loo xil saaray inuu sameeyo muuqaallada, inkastoo uu dhibaato badan ka maray, maadaama uusan la qabsanin billowgoodii hore, kharashkoodana uu ku cuslaa.
Studio-giisii wuxuu xitaa markii dambe xalaqooyin ka mid ah muuqaalada ku lifaaqay howlo sir ah, iyadoo lagu soo daray kartoonno kale. Magacyo Czech ah ayaa laga dhigay Ameerikaan, si loo joojiyo fikirka dadka daawadeyaasha ah ee aamisanaa in kartoonka uu u ol'oleynayay shuciyadda.
Xuquuqda Sawirka WB Kids WB Kids
"Maadaama ay jirtay xayiraaddii lagu soo rogay midowgii soviet ee dagaalkii qaboobaa, farshaxamiisteaasha ku sugnaa studio-ga magaalada Prague waligood ma aysan daawanin Tom iyo Jerry", Deitch ayaa waa dambe sidaas ku yiri idaacadda Radio.cz.
Wuxuu ogaa in marka uu qorshaha muuqaallada baddalo uu dhaleeceyn kala kulmi doono daawadeyaasha, 13-kii xalaqo ee uu sameeyayna waxaa loo tix galiyay kuwii ugu xumaa ee abid la sameeyay.
Isaga kaddib shaqada waxay usii gudubtay farshaxamiiste kale oo lagu magacaabi jiray Chuck Jones, kaasoo ku soo caan baxay sameynta filimo kale oo kartoon ahaa.
Markii uu farsamada kartoonka billaabay, wuxuu wax ka badalay sawirkii Tom, wuxuuna u ekeysiiyay karoon kale oo uu horay u sameeyay.
Image caption Chuck Jones wuxuu mas'uul ka ahaa 34 xalaqo oo Hollywood-ka lagu sameeyay intii u dhaxeysay 1963 ilaa 1967
Mark Kausler, oo 72 jir ah, wuxuu ka mid yahay dadka xasuusta fiican ka heysta Tom iyo Jerry, sababtoo an wuxuu daawan jiray markii uu soo korayay.
Wuxuu mar walba aabihiis gacanta usoo jiidi jiray si uu u daawado marar badan. Waagii dambena wuxuu billaabay inuu laftiisa sameeyo kartoon isaga u gaar ah, kaasoo ay jecleysteen dadkii jilayay.
"In badan oo ka mid ah waxaa lagu saleeyay sida ay u muuqdeen iyo qaabka uu uusika ugu soo baxayay", ayuu yiri.
"Mar kasta oo wax laga sii baddalo waan la socday, waana jeclaa shactiradiisa".
Lahaanshaha sawirka Mark Kausler
Image caption Kausler wuxuu qudhiisa ka shaqeeyay filimo badan oo kartoon ah
Xoogaa wuu kaoo yara daahay inuu qeyb ka noqdo farshaxamiisteyaashii soo sari jiray Tom iyo Jerry, laakiin wuxuu si fiican u xasuustaa xiisahooda.
Markii ay Hanna iyo Barbera ka shaqeynayeen shirkadda MGM, daawashada telefishinka waxaa loo arkayay "wax xun", laakiin labadooda ayaa markii dmabe ka shaqeeyay inay muuqaalkan dadka jecleysiiyaan. Waxay sameyn jireen xalaqooyin ka wakhti dheer sidii hore, kana kharash yar.
Kartoonk-ka ay iyaga soo alifeen ayaa carruur badan maskaxdooda la wareegay mudo tobannaan sano ah.
Markii lasoo gaaray sanadkii 1970-kii, labada xayawaan waxaa lagu celiyay Tom iyo Jerry kaliya, waana laga saaray waxyaabihii kale ee ku jiray.
Lahaanshaha sawirka Bettmann via Getty
Image caption Hanna (bidix) iyo Barbera (midig) waxay isku dayeen inay dib u shaqaaleysiistan howl-wadeennadii shirkadda MGM, intii ay awoodi kareen
Lahaanshaha sawirka Warner bros via Getty Images
Image caption Kartoonka lagu magacaabo Jetsons muuqaalladii loogu jeclaa ee ay labadan farshaxamiiste sameeyeen 1960-meeyadii
Kartoonka "Jetsons" oo ay Hanna iyo Barbera soo saareen 1960-meeyadii, waxaa laga saaray xalaqooyin ka mid ah oo loo arkay inay cunsuriyad taabanayaan.
Laakiin Tom iyo Jerry ayaa ilaa hadda u muuqda inay yihiin kuwo mar dhow la aasaasay, marka la eego sida loo xiiseeyo wali.
Filimkan ayaa xitaa si la yaab leh warbaahinta caalamka u qabsaday sanadkii 2016-kii, kaddib markii ay dowladda Masar ku eedeysay in kartoonka Tom iyo Jerry loo adeegsanayo kicinta qalalaasaha Gobolka Bariga Dhexe.
Sidoo kale Hoggaamiyaha sare ee Iiraan ayaa ugu yaraan labo jeer xiriirka uu wadankiisa la leeyahay Mareykanka ku tilmaamay sida Tom iyo Jerry.
Lahaanshaha sawirka India Today via Getty Images
Image caption Tom iyo Jerry wali waxaa aad looga xiiseeyaa guaha Hindiya, waxaana lagu badalaa luqadaha waddankaas
Image caption Xero qaxooti oo ku taalla Ciraaq ayaa sanadkii 2014-kii mid ka mid ah darbiyadeeda lagu xardhay Tm iyo Jerry.
Maadaama ay muuqaalada Tom iyo Jerry joogto ka ahaayeen jadwalba BBC-da muddo tobannaan sano ah, afti la sameeyay sanadkii 2015-kii waxaa lagu ogaaday inuu yahay muuqaalka loogu jecelyahay Britain, oo xitaa dadka waaweyn ay xiiseeyaan.
80-kii sano ee uu jiray kartoon-kan, waxaa bisadda iyo jiirka lagu sameeyay nooc walba oo shactiro ah.
Bill Hanna wuxuu geeriyooday sanadkii 2001-dii halka Joe Barbera uu isaguna dhintay sanadkii 2006-dii.
Hal sano ka hor geerida Barbera, waxaa markii ugu horreysay lagu amaanay soo saarista Tom iyo Jery, isagoo uusan la jirin ninkii ay isla soo billaabeen.
Image caption Tom and Jerry: Muuqaallada taxanahan ayaa guul darrooyin kala kulmay box office-ka sanadkii 1992-kii
Lahaanshaha sawirka Warner Bros Animation
Image caption Nooc cusub oo ah filimka Tom iyo Jerry, ayaa lagu sameeyay kumbuyuutar halkii gacanta lagu xardhi lahaa, waxaana la sii deynayay tan iyo sanadkii 2014-kii
Warner Brothers, oo hadda leh xuquuqda soo saarista musaslsalka Tom iyo Jerry, ayaa dabayaaqada sanadkan soo saari doona filim cusub oo caadi ah.
Wax badan lagama oga qaabka uu filimkaas noqonayo, laakiin jileyaasha ku jira ayaa laga xusi karaa Chloë Grace Moretz iyo Ken Jeong.
1 Oktoobar 2014